Gudiga Wacyi gelinta taakulaynta Ciidanka Qaranka oo la hadlay Soomaalida Ohio (Daawo Sawiradda) – Radio Muqdisho
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Columbus Ohio ayaa soo dhaweeyay xubno ka mid ah gudiga wacyigalinta taakuladda ciidamadda qaranka Soomaaliyeed.
Duuliye Sare Asli Hassan Abade iyo Abdilahi Hosh oo kamid ah gudiga taakuleynta ciidanka ayaa uga kala yimid goboladda Taxes iyo Minnesota sidii ay Soomaalida Ohio ugala hadli lahaayeen in ay u istaagaan taakulada ciidanka iyo in la soo gaaray xiligii Soomaaliya isku tashan lahayd awooda dhaqaale ee lagu xisaabtamayana ay qurbajoogtu qeyb ka tahay iyada oo la ogyahay in ay yihiin laf dhabarta dhaqaalaha Soomaaliya.
Xubnaha ka qeyb qaadanayay barnaamijkan waxaa ka mid ahaa Sheikh Hassan Jami oo isna isla Minnesota uga yimid waxa uuna malintii jimcada boqolaal Soomaali ah kula hadlay Masjidka Ibnutaymiya ee Magaalada Columbus isaga oo gaarsiinayay fariinta la xariirta sidii ciidanka loo garab istaagi lahaa.
Inkasta oo ay maalin shaqo ahayd hadana waxaa muuqanaysay in dadku ay aad ugu xiiso qabaan in ay helaan dalkooda oo leh awood ciidan oo amaanka iyo xaduudaha suga si ay u yeeshaan dal ay ku aamini karaan Ubadkooda iyo hantidooda.
Sheikh Adan Abdulle oo ka mid ah culumada Columbus ayaa xusay in ay culumu ahaan u taaganyihiin in ay qeyb ka qaataan soo celinta awoodii ciidan iyo caawinta wiilashooda ku shaqeynaya marxaladda adag.
Gudoomiyaha Jaaliyadda Hassan Ali Omar ayaa dhankiisa farta ku fiiqay in hadii si dhab ah loo wajaho barnaamijka caawinta ciidanka ay qurbajoogtu ku filantahay balse loo bahanyahay in dadka la gaarsiiyo lana helo dad aan ka daalin howshaan.
Safiir Abdikarim Omar oo u soo joogay awoodii ciidanka ayaa ka codsaday dowladda Soomaaliya in baahi walba oo haysa ay isku daydo in ciidamadeeda ay iyadu tababarato kana gudubto in dalal dano kale lehay ciidamo kala nooc ah wax baraan taas oo caqabad ku noqon karta helida ciidan Nadiif ah.
Asli Hassan Abade iyo Abdilahi Hosh oo ah xubno ka tirsan gudiga ayaa u sheegay jaaliyada in ka gudi ahaan shaqadoodu ay tahay in ay dadka gaarsiiyaan Fariinta balse aysan iyagu shuqul ku lahayn wax lacag qabasho ah oo qofkii dhaqaalo bixinayo uu ku shubi karo Akoono loogu talo galay oo Online iyo Xawilaadba leh, balse loo bahanyahay in qof walba is xil saaro oo uu daqiiqado ka mid ah waqtigiisa siiyo sidii uu taakuladda u bixin lahaa.
Waxa uu ahaa barnaamij dadku aad u xiisaynayay waxaana lagu balamay in ay ka howlgalaan guddi lagu magacaabay isla goobta oo reer Ohio sii gaarsiin doona qaabka wax loo bixinayo.
Waa markii ugu horeysay oo ay guddigan yimaadan Ohio waxayna ku wajahan yihiin Goboadda kale ee Mareykanka.